IGong: Ingxoxo yeQonga lobuNgcali bamaQela okuThengisa | Martech Zone
Lwesine, Disemba 14, 2017 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 Douglas Karr
Gong's incoko ye-analytics injini ihlalutya ukuthengisa iifowuni kwinqanaba lomntu kunye nelokuhlanganisana ukukunceda uqonde oko kusebenza (kwaye yintoni engekho).
I-Gong iqala ngokudityaniswa kwekhalenda elula apho ikhoyo Iskena Ikhalenda nganye yokuthengisa i-reps ekhangela iintlanganiso zentengiso ezizayo, iifowuni, okanye idemo yokurekhoda. U-Gong emva koko ujoyina umnxeba wentengiso nganye ocwangcisiweyo njengendibano yesiqhelo yokurekhoda iseshoni. Zombini iaudiyo kunye nevidiyo (ezinje ngezabelo zescreen, imiboniso, kunye needemo) ziyarekhodwa kwaye zitshatile kunye. Umnxeba ngamnye wentengiso ubhalwa ngokuzenzekelayo ukusuka kwintetho ukuya kwisicatshulwa ngexesha lokwenyani, ukuguqula iincoko zentengiso zibe zedatha enokukhangelwa.
I-Gong ikwanaso nesicelo esiphathwayo sokujonga kwakhona iifowuni zeqela lakho kwi-smartphone yakho. Uhlelo lokusebenza lwenza abaqeqeshi bokuthengisa ukuba bashiye ingxelo esekwe kwilizwi kwiindawo ezithile zexesha lokufowuna.
Igong idityaniswa ne Inkomfa yeWebhu isoftware Zoom, GotoMeeting, JoinMe, Cisco WebEx, BlueJeans, Clearslide kunye ne-Skype yeShishini. Ikwadibanisa ne Abafowuneli -Kubandakanya i-InsideSales, i-SalesLoft, i-Outreach, i-Natterbox, i-NewVoiceMedia, i-FrontSpin, iGroove, i-Five9, iiNkqubo zeMfonomfono, i-Shoretel, i-Ringcentral, i-TalkDesk, kunye ne-InContact. Idityaniswa ne-Salesforce CRM kwaye zombini i-Outlook neGoogle Calendars.
Jonga i-Gong Live Demo
tags: Iijini ezibhluICisco WebExukucocekaincoko yobukrelekreleCRMubukrelekrele be-crmZintlanu9Ngaphambiligongikhalenda kaGoogleintombazanaemseleniQhagamshelanaNgaphakathi kwintengisoDibana namIbhokisi yeNatterINewVoiceMedianembonoikhalenda yokubonaukufikelelaIinkqubo zefowuniIringiCentralumnxeba wentengisorekhoda yokuthengisa umnxebaiifowuni zentengisoukuqeqesha ukuthengisaabathengisi bokuthengisaUkunika amandla ukuthengisaamaqela okuthengisaukuthengisaIntengisoLoftIsihlanguSkype yo shishinoI-TalkDeskyenza nkulu